Oromo (om) : Template “ubuntu-docs-about-ubuntu” : Maverick (10.10) : Translations : ubuntu-docs package : Ubuntu
Barruu-ubuntuu@lists.ubuntu.com(Pirojektii Barruu Ubuntuu)
Translated and reviewed by Aadaa on 2009-10-16
seensa as dhufaa fi falaasama sirna dalaga ubuntuu
Ubuntuu - Linux dhala namaaf!
galataa fi hayyama
Barruun kun gartuu barruu Ubuntuun eegama (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Namoota gartuu kanatti hirmaatan ilaaluuf, <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">Fuula Hirmaattotaa</ulink> ilaali.
Barruun kun qophaa'ee kan dhiyaate Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA) jalattidha.
Tuqaalee hayyama barruu bu'uura koodii ubuntuu jalatti jijjiiruu, itti dabaluu fi qaruun walabadha. Dalagaaleen kanarraa argaman martuu hayyama kana jalatti gad-dhiifamuu qabu.
Contributors to this translation: Aadaa.